August 2019 – MM Stars
သင့်နာမည်အရ စက်တင်ဘာလဟာ သင့်အတွက်ဟုတ်ရဲ.လား ?
သင့်နာမည်အရ စက်တင်ဘာလဟာ သင့်အတွက်ဟုတ်ရဲ.လား ? လူသားတိုင်းမှာ ကံဆိုးကံကောင်းတွေရှိတက်ကြစမြဲပါပဲ ကိုယ့်ကံကြမ္မာက ဘယ်အချိန်မှာဆိုးမယ် ကောင်းမယ်ဆိုတာ သိထားရရင် ကိုယ့်အတွက် အဆင်ပြေမှုတွေရှိနိုင်တာမို့ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုယ် တွက်ချက်ထားကြည့်ဖို့ အဖြေရှာကြည့်လိုက်ပါနော် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် […]
သင့်ဗီဇက ခေါင်းဆောင်လား နောက်လိုက်လား
သင့်ဗီဇက ခေါင်းဆောင်လား နောက်လိုက်လား လူတိုင်းမှာ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းတွေရှိနေကြပါတယ် ၊ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှ ရှိသင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ သင့်မှာရှိနေပြီလား ဒါမှမဟုတ် သင်က နောက်လိုက်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်မယ့်သူလား စသဖြင့်ရဲ. အဖြေတွေကတော့ ရှိနေပါပြီ ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးသာ စမ်းသပ်လိုက်ပါ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး […]
သင့် ဘောလုံးခြေစွမ်းက ဘယ်ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားနဲ့ တူနေမလဲ
သင့် ဘောလုံးခြေစွမ်းက ဘယ်ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားနဲ့ တူနေမလဲ ယောင်္ကျားလေးတိုင်း ဘောလုံးကန်တာဝါသနာပါကြပါလိမ့်မယ် ဒီထဲကမှ ကိုယ်အားကျရတဲ့ ဘောလုံးအကျော်အမော်တွေလည်း ရှိကြပါလိမ့်မယ် သင်က ဘယ်ဘောလုံးအကျော်အမော်ရဲ. ခြေစွမ်းမျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားသလဲ သင်ကိုယ်တိုင်တောင် သိချင်မှ သိပါလိမ့်မယ် သင့်ခြေစွမ်းကို ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး […]
အနာဂတ်မှာ သင် ဘယ်လို အိမ်မျိုး ပိုင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာ အဖြေသိနိုင်ပါပြီ
စိတ်ကူးနဲ့ လက်တွေ့ ဆိုတာ အမြဲကိုက်ညီနေတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့အရာကို ရအောင်လုပ်ယူနိုင်စွမ်းဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ အရည်အချင်း ကြိုးစားမှုမှာ အများကြီး မူတည်နေပါတယ် … ။ သင့်အတွက် အနာဂတ်မှာ ရရှိပိုင်ဆိုင်မယ့် အိမ်က သင့်စိတ်ကူးနဲ့ ကိုက်ညီပါရဲ့လားဆိုတာ အောက်ပါပုံကို နှိပ်ပြီး အဖြေကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ ။ […]
သင့်ချစ်သူဆီက သင် ပထမဆုံးရမယ့် လက်ဆောင်က ဘာဖြစ်မလဲ ?
သင့်ချစ်သူဆီက သင် ပထမဆုံးရမယ့် လက်ဆောင်က ဘာဖြစ်မလဲ ? ချစ်သူဆီက လက်ဆောင်ဆိုတာ ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် တန်ဖိုးရှိပါတယ်နော် ဒါပေမယ့် ချစ်သူဆီက ပထမဦးဆုံးရတဲ့ လက်ဆောင်က တန်ဖိုးအရှိဆုံး ဒါမှမဟုတ် အမှတ်တရ အဖြစ်ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်…သင့်ချစ်သူဆီကရော သင်က ဘယ်လို လက်ဆောင်မျိုး ပထမဆုံး လက်ခံရရှိမှာလဲဆိုတာ… ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ […]
သင်က ဘယ်လိုပေါ်ပင်မှာ ပျော်ရွှင်နေသူလဲ ?
သင်က ဘယ်လိုပေါ်ပင်မှာ ပျော်ရွှင်နေသူလဲ ? လူတိုင်း ပေါ်ပင်မှာ ပျော်ရွှင်ဖူးပါတယ် သင်ကရော ဘယ်လိုပေါ်ပင်မှာ ပျော်ရွှင်ဖူးသူလဲဆိုတဲ့ အဖြေကို ဖွေရှာကြည့်ရအောင်ပါနော် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကိုကျေနပ်အားရတယ်ဆိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှဝေဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။ Unicode သငျက […]
နိုင်ငံတော်အတွက် သင်ဘာကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာလဲ ?
နိုင်ငံတော်အတွက် သင်ဘာကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာလဲ ? နိုင်ငံတော်အတွက် သင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိပါတယ် ဒါကို လူအများသိအောင် ပြောပြဖို့လည်း လိုပါမယ် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကိုကျေနပ်အားရတယ်ဆိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှဝေဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။ Unicode နိုငျငံတျောအတှကျ သငျဘာကွောငျ့ […]
သင့်ရုပ်ရည်နဲ့ အရည်အချင်းအရ ဘာအလုပ်နဲ့ ကိုက်ညီမလဲ ?
သင့်ရုပ်ရည်နဲ့ အရည်အချင်းအရ ဘာအလုပ်နဲ့ ကိုက်ညီမလဲ ? လက်ရှိ အလုပ်လုပ်နေပြီလား မလုပ်ရသေးဘူးလား မလုပ်ရသေးရင် ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလုပ်သင့်တယ် လုပ်နေပြီဆိုရင်လည်း သင်လုပ်နေတာနဲ့ ကိုက်ညီရဲ.လားဆိုတာရဲ. အဖြေက… ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကိုကျေနပ်အားရတယ်ဆိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှဝေဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။ […]
သင်က ဘယ်လိုလူအဖြစ် သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ခံရမှာလဲ
သင်က ဘယ်လိုလူအဖြစ် သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ခံရမှာလဲ သမိုင်းထဲမှာ သင့်ကိုဘယ်လိုလူအဖြစ် လူတွေက သတ်မှတ်မှာလဲ လေးစားခံရမှာလား ဒါမှမဟုတ် အားကျခံရမှာလား အဆိုးတွေလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကိုကျေနပ်အားရတယ်ဆိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှဝေဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။ Unicode သငျက […]
သင့်ကို အချစ်အကြောင်း ဘယ်သူက သင်ပေးမှာလဲ ?
သင့်ကို အချစ်အကြောင်း ဘယ်သူက သင်ပေးမှာလဲ ? အချစ်အကြောင်း ဘာမှမသိသေးတဲ့ သင့်ကို အချစ်အကြောင်း သင်ပေးမယ့် ဆရာတစ်ဆူရှိနေပါတယ် သူက ဘယ်သူများဖြစ်မလဲ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကိုကျေနပ်အားရတယ်ဆိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှဝေဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။ Unicode […]